UJenssen ubonakalisa ingaphakathi lezona ntsomi ze-Star Wars zeenqanawa | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngokuqinisekileyo inxenye yengcinga yabalandeli abaninzi beStar Wars yenzekile ngamanye amaxesha izakuba njani ezo nqanawa ngaphakathi kwaye ziyakwenziwa njani ukuze zihambe ngesantya sokukhanya okanye ziphephe zonke iintlobo zohlaselo oluvela eBukhosi xa zijikeleza ngohlobo olukhethekileyo kwezinye zeemiboniso bhanyabhanya ezinomtsalane kwezinye zeefilimu zale franchise yasentsomini.
UHans Jenssen usebenze njenge Umzobi wobugcisa amashumi eminyaka kwaye ubonakalisa ulwakhiwo lwangaphakathi lwezithuthi kunye nezakhiwo. UJenssen waziwa kakhulu ngothotho lwe Star Wars, apho enza khona ukuphindaphinda kweDarth Vader's TIE Fighter, iphiko le-X Skywalker, kunye nezinye zeenqanawa ezahlukileyo ezivela kuthotho lwefilimu olwenziwe nguGeorge Lucas ngoku ophethwe nguWalt Disney.
Lo msebenzi umthathe iminyaka elishumi kwaye kuwo uyabona italente enobuchule kunye nobuchule obufunekayo ukwenza naliphi na kula maqhekeza enza uthotho olubonakalayo.
Kuyamangalisa ukuba le misebenzi yobugcisa ibikho yenziwe ngesandla ngokupheleleyo.
Es kwiwebhusayithi yakho Apho abonisa inkqubo yenyathelo ngenyathelo. Okokuqala, Uzoba inqanawa ngepensile kwigridi ngaphambi kokuba uqhubeke ubapeyintye ngomaleko ngokungqengqileyo kwaye ngokuthe ngcembe wenze ubume kunye nokungafani.
Yonke le nkqubo, isekwe kubuchwephesha afunde ngabo nge-80s, can thatha malunga neeyure ezili-15 ngosuku.
Chaza ntoni kukho ingqiqo kuyo yonke imizekeliso ukwenza inkqubo okanye icandelo lomsebenzi ngamnye wesithuthi kwaye uzidibanise neentambo, imithombo yamandla, ukupholisa, okanye nantoni na eya kunyanzelisa ngokwaneleyo.
Unsebenzi umtsalane nje njengoko ubona kwimifanekiso esabelana ngayo apha. Unayo iwebhusayithi yakhe ukulandela umsebenzi wakhe kunye nezinye iziqwenga ezenza olu luhlu lukhohlakeleyo.
Ukuba ufuna ukufumanisa enye yeenkwenkwezi ze-Star Wars.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ezona nqanawa ze-Star Wars zibalaseleyo ziboniswe ngokweenkcukacha ezinkulu